Mmetụta Hong Kong - Zhuji Feihu Textile Machinery Co., Ltd
Mmetụta Hong Kong
Hong Kong bụ otu n'ime mmadụ kacha ebe n'ụwa. Na mma ebe ileta, e nwere ihe karịrị izu oke nlegharị anya na-ị na-arụsi ọrụ ike n'oge ọnụnọ gị.
Best oge gara
The oge kacha mma iji gaa Hong Kong bụ na gburugburu ufọt ufọt October na mbubreyo December. N'oge ndị a ọnwa na ọnọdụ okpomọkụ dị nwayọọ.
Hong Kong nwere elu-tech njem ka na-gburugburu bụ mara mma dị mfe. E-azụ na bọs ka o di mfe njem n'etiti Hong Kong Island, Kowloon, na New n'ókèala na 27 ugbo ụzọ gasị.
Na Hong Kong, i nwere ike ịhụ oké ọnụ ebe anọ na Tsim Sha Tsui na Central ebe. The Tsim Sha Tsui bụ nso ihe niile ị chọrọ na-ahụ na Hong Kong, n'ihi ya, ọ bụ gị mma nhọrọ. Ị nwere ike ịga na-eje ije ka Avenue of Stars, gaa Hong Kong Island site ugbo ma ọ bụ ka MTR. Mong Kok nke bụ naanị ole na ole ụgbọ pụọ.
Disneyland na Ocean Park – Inwe na aka gị ime nwa ahụ ọzọ. Gaa Leta Mickey Òké, oké osimiri e kere eke na nwere fun na Giant Pandas na Ocean Park.
Po Lin Obibi – Nke a n'ebe obibi ndị mọnk e wuru na 1924, na na ọ na-nsogbu na Lantau Island. Ọ na-ọzọ a maara dị ka ndị "Buddha Alaeze South.”
Victoria elu – a na-ewe gị n'elu elu, nke esịmde 1,700 ụkwụ n'elu mmiri. Ebe i nwere ike na-ele skyscrapers of Victoria Harbor na Kowloon na gbazere na ịma mma nke ndị gbara ya gburugburu na ugwu nta. Ozugbo ị bụ n'elu, ị ga-ahụ echiche nke otú buru ibu obodo ahụ bụ.
Madame Tussauds Hong Kong – Nke a bụ a ngosi nka na-egosipụta wax ọgụgụ nke banyere 100 siri.
A Symphony nke Ìhè – Kwa abalị na 8:00 pm i nwere ike na-enwe mmasị n'èzí na-egosi na laser ọkụ na-agụnye ihe karịrị 40 ụlọ.
Ọ bụrụ na ị bụ n'ime shopping, ị ga-eleta ndị n'okporo ámá ahịa. Ebe kasị mma na-aga na-Stanley Market, ladies Market, na Temple Street Night Market.
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ka ịzụ ahịa na malls na ụlọ ahịa na i nwere na-aga Causeway Bay. Na Causeway Bay ị ga-ahụ onwe ha ejiji Jeriko, kasị mma ngalaba na-echekwa, na Times Square ahịa.
I nwekwara ike gaa zụọ ahịa na Mongkok. Ebe ị ga-ọnụ ala jeans, nche, handbags, na mbipụta ndị mmebe nsụgharị.
Foods na ọṅụṅụ
Hong Kong bụ ma ama n'ihi na ya oké oriri. N'okpuru ị ga-achọta ụfọdụ ndị kasị mma efere.
inyoghi inyoghi nchikota – i nwere ike ịhụ na ọ na-akasị na tii ụlọ. Ọ na-àmà site braised ọkụkọ ụkwụ na oporo jupụtara har Gao. Ị nwere ike a uto nke onye nke kasị mma inyoghi inyoghi echekwara na Lin Heung Teahouse.
anụ ọgazị – a na-agbanwe ụtọ na a ngwakọta nke n'elu 20 ngwa nri na aromatics na ṅara n'ọkụ iji unyi.
Soy ihendori braised kpalakwukwu – kpalakwukwu bụ a ọchịchịrị, succulent anụ ọzọ flavors mgbe ọbọgwụ. Ebe dị mma nwere a uto nke a magburu onwe ya efere bụ na Fung Lam Restaurant.
bi feihu akwa igwe co., Ltd
Previous : Enwe Miami
Osote : Kirby \_ 's Epic Yarn